DKNY NY8753 Stainless Steel Watch with Plastic Bracelet – White and Coral: Buy Sell Online @ Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
DKNY NY8753 Stainless Steel Watch with Plastic Bracelet – White and Coral
Product details of DKNY NY8753 Stainless Steel Watch with Plastic Bracelet – White and Coral
Specifications of DKNY NY8753 Stainless Steel Watch with Plastic Bracelet – White and Coral
NY8753 ????????????? ?????????? - ?????????????? ?????????
Ratings & Reviews of DKNY NY8753 Stainless Steel Watch with Plastic Bracelet – White and Coral
ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ DKNY ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပါပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းနေတာလေးက မိုက်တယ် အရောင်ကလဲ ပွဲတက်အတွက် အရမ်းသင့်လျော်ပြီး အရည်အသွေးကအရမ်းကေင်းပါတယ်။
အရမ်းမိုက်တဲ့နာရီလေးပါ။ ဒီဇိုင်းဆန်းတော့ ၀တ်ရတာ စတိုင်ကျတယ်။ အချိန်လည်းမှန်တယ်။